सांसद बन्न पार्टी निर्णयको पर्खाइमा बामदेव, पूरा होला त चाहना ? - Tamang Online
सांसद बन्न पार्टी निर्णयको पर्खाइमा बामदेव, पूरा होला त चाहना ?
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमलाई उप चुनाव लडाएर संसद प्रवेश गराउने विषय नेकपाभित्र आजभोलि प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ । केही समयअघि नेता गौतमलाई डोल्पामा उपचुनाव मार्फत सांसद बनाउने विषयमा आन्तरिक संवाद सुरु भएको थियो । आफू सांसद बन्न इच्छुक रहेको कुरा नेता गौतमले यसअघि नै सचिवालयको बैठकमा व्यक्त गरेका थिए । त्यो विषयमो बैठकमा छलफल पनि भएको थियो । तर उनलाई चुनावमा उठाउने नउठाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन ।
‘उहाँ डोल्पाबाट चुनाव लड्ने भन्ने विषयमा सबैतिर हल्ला भइसकेको छ । सचिवालयले अहिलेसम्म डोल्पाबाट चुनाव लडाउने वा नलडाउने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । उहाँको चाहना डोल्पाबाट नै चुनाव लड्ने भन्ने छ । पार्टीले निर्णय गर्न जति ढिला गर्छ, मौसमको कारण उहाँको चुनाव लड्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । अहिले उहाँले तयारी पनि गरिरहनुभएको छ चुनावको । तर पार्टीले निर्णय गर्न ढिला गर्दा उहाँलाई अलि तनाव सिर्जना भएको छ ।’ नेता गौतम निकट एक नेताले बताए ।
नेता गौतम अन्तर्घात गरेर आफूलाई हराउने नेता–कार्यकर्तालाई चुनाव जितेरै देखाउन चाहन्छन् । ‘उहाँ (बामदेव) मा चुनाव जितेरै सांसद हुने मन छ । यो अन्तर्घात गर्नेलाई जवाफ पनि हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ ।’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
सांसद बुढाले २०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावमा फराकिलो मतले काँग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गरेका थिए । बुढाको पक्षमा ११ हजार सात ६१ मत आउँदा काँग्रेस उम्मेदवार अंगदकुमार बुढाले तीन हजार एक सय ६६ मत मात्रै पाएका थिए । बुढा २०७० को दोस्रो संविधानसभामा पनि डोल्पाबाट निर्वाचित भएका थिए । रातोपाटीबाट |
« लन्डन र हङकङको भन्दा ठूलो एयरपोर्ट निजगढमा किन? (Previous News)
(Next News) निर्मला हत्याकाण्डको अर्को पाटो खुल्यो ! कनामा कानेखुसी गरेपछि… »